Realme U1 နည်းပညာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပေါက်ကြားသောအင်္ဂါရပ်များ Androidsis
နို ၀ င်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Oppo ၏အမှတ်တံဆိပ်ခွဲသည်အရှေ့စျေးကွက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေပြီး၊ ကိရိယာအသစ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုန်း၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဈေးနှုန်းချိုသာမှုနှင့်အတူပုံမှန်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုလို Realme U1, ကက်တလောက်သို့ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်နှင့်အများအပြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်၎င်း၏မရောက်မီ filtered ခဲ့ကြသည်ရာမှလာမည့် terminal ကို။
ဒီမိုဘိုင်း၏အဓိကအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အရင်းအမြစ်၏အဆိုအရ Realme U1 တွင် ၆.၃ လက်မ ၂,၃၄၀ x 2,340-pixel FullHD + LCD မျက်နှာပြင်ရှိသည် 2.5D Corning Gorilla Glass3ဖန်သားပြင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးသည် ၉၀.၈% ဖြစ်ပြီးအတော်လေးမြင့်မားပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဆု အရာ၏သူယူဆတယ်။ (ရှာဖွေရန် - Realme2Pro သည်အလယ်အလတ်တန်းစားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တရားဝင်ဖြစ်သည်).
ဘုံ2Pro ကို
ဖုန်းကစွမ်းအားပြည့်တယ် အသစ် Helio P70 ပရိုဆက်ဆာMali G72 GPU ပါ ၀ င်သည့် octa-core chipset တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး max ကိုရရှိသော SoC ။ 2,1 GHz အမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်3သို့မဟုတ်4GB RAM နှင့် 32 သို့မဟုတ် 64 GB သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းတွင်ပိုင်ရှင်များအပိုနေရာ ၂၅၆ GB အထိထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့် microSD ကဒ်အထိုင်ရှိသည်။
ဓာတ်ပုံဌာန Realme U1 တွင်f/ 25 aperture ပါ ၀ င်သော 2.0 MP ရှေ့ကင်မရာရှိသည်နောက်ကျောတွင်f/ 13 aperture ပါ ၀ င်သော 2.2 MP sensor နှင့်အခြား ၂ MP သည်f/2aperture ပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် ၃၅၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီလည်းရှိပြီး 2.4 V / 3,500 A.
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်၌ရှိနေသောလည်ပတ်စနစ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မရှိပါAndroid 5.2 Oreo ကို အခြေခံ၍ ColorOS 8.1 ကိုသယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်းမှာအလွန်ကြီးမားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လူအများစုကအတူရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ထား အန်းဒရွိုက် Pie မှကြေငြာအနာဂတ် update ကိုအတူ ColorOS အသစ်။ ဤသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Realme U1 သတ်မှတ်ချက်များ - MediaTek ၏ Helio P70 နှင့်ထိုထက်ပိုသောအရာများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်